Southern Cross University - Kudzidza muAustralia. Education kunze Kwenyika
guta : Lismore
Musakanganwa kuti kurukura Southern Cross University
Kunyoresa pana Southern Cross University
Southern Cross University (SCU) ari kutsvakurudza ndichibvunza yunivhesiti paruzhinji Australian. Pazvikoro dziri pamusoro North Coast of New South Wales, Australia uye kumaodzanyemba Gold Coast, Queensland, Ositireriya. Unobudisawo achidyidzana pamwe Mulpha Australia The Hotel School Sydney uye Melbourne. pedyo 15,000 vadzidzi wakanyoresa pana Southern Cross University, kudzidza pamusoro kembasi uye Via dzidzo daro. vadzidzi International vanobva 80 nyika kudzidza onshore uye collaborates pamwe nemasangano pemvura kuSingapore, China, Uzbekistan uye New Zealand.
Rokutenderwa uye dhigirii madhigirii zvakakumikidzwa kuburikidza zvikoro nomwe zvedzidzo uye Gnibi College of Indigenous Australian Peoples. The University Unobudisawo SCU College achiendesa-gore maviri shamwari madhigirii.
Mune Australian Research Council Excellence muna Research nokuda Australia 2012 ripoti, Southern Cross University kubudirira “zvakanaka pamusoro mureza nyika” muminda kutsvakurudza kusanganisira geochemistry nhanhatu, zvidzidzo zvemhuka, chirimwa uye mafuro kugadzirwa uye foresitiri sayenzi.
Southern Cross University anopa makosi Arts, dzidzo, sayenzi evanhu, bhizimisi, ushanyi, mutemo, utano, zvizvarwa zvidzidzo, uye kwezvakatipoteredza nesayenzi. It akatanga mapurani mu 2013.
Southern Cross University ari noutano, akararama Australian yunivhesiti chete pazvikoro akanaka panguva Gold Coast, Lismore uye Coffs Harbour, uye bazi pazvikoro muSydney uye Melbourne.
The University Unobudisawo The Hotel School Sydney uye The Hotel School Melbourne achidyidzana pamwe Mulpha Australia.
Tinogamuchira vadzidzi vaibva kupfuura 60 nyika pose uye ubayire Rokutenderwa uye dhigirii makosi unokurudzira uye anonditsigira ekudzidza. The University ane simba mudzidzi kukoshesa uye anodada yakambomira lecturers ayo, vazhinji vacho vanonzi vatungamiriri muminda yavo.
madhigirii edu inopihwa mhiri zvakawanda nokuranga, uye zvakagadzirirwa mukati zano indasitiri. Vakawanda anosanganisira basa placements uye internships uye nezvimwe maoko-kudzidza kubereka basa-vakagadzirira kudzidza. Research zvakare kuchaitwa munzvimbo dziri muAfrica nemhiri kushanda uye munyika yose kukosha, mune nokuranga sezvo paiva geoscience, chirimwa genetics, cetacean tsvakurudzo, utano uye KWAHWO uye ushanyi.
Southern Cross University ari yandaipuwa pamusoro 500 muna Times yepamusoro World University Rankings 2015-16. The kuera, zvino avo rechi12 gore, tiwane mashoko kubva 1126 Masangano nyika yose uye kunobva pakudzidzisa, tsvakurudzo, ruzivo chinja uye maonero dzakawanda.
Southern Cross University ari pakati Times Higher Education 150 nyika yepamwoyo vaduku mumayunivhesiti nokuda 2016. The kuera dzinobva chete kuita zviratidzo sezvo THE World University Rankings – kudzidzisa, tsvakurudzo, anowanika papi, dzakawanda maonero uye indasitiri mari.
Nokuti rechitatu anotevedzana gore, SCU kwakatsanangurwawo yandaipuwa nhamba imwe muAustralia dzakawanda rutsigiro mudzidzi kubudikidza chaicho International Student 2015 tsvakurudzo, uye yandaipuwa nhamba mbiri muAustralia kunopindirana ruzivo kudzidza.
School of Arts uye Social Sciences
School of Business uye Tourism
School of Environment, Science uye Engineering
National Marine Science Center
School of Health uye Human Sciences
School of Law uye Justice
1994 – 2014 yaiva nguva yaifadza Southern Cross University sezvo hwakabva chii chaiva Teachers College, muna 1970, kupinda zvakazara-fledged University pamwe yayo kuzivikanwa 1994.
Sechikamu yedu 20 gore mhemberero, isu pakuva dzakatevedzana nyaya, nhoroondo mashoko uye munhu Kuyeuka. Izvi zvinosanganisira yaiitwa yakapfupikiswa Nhoroondo Pfupi SCU kubva Teachers College kuna University. Takaona zvakare raisanganisira rakawedzerwa kurondedzerwa vakasiyana-gore mashanu nguva achirondedzera nezvenhoroondo yeYunivhesiti pamusoro emakore maviri: 1994 - 1998, 1999 - 2003, 2004 - 2008 uye 2009 - 2013.
Takaona sourced nyaya kubva kudzidza, tsvimbo uye nemakanzuru masangano, uye pane mazita Chancellors uye Vice Chancellors avo vakashumira University uye anga paku kuumba inonanga University. Uyewo zvaisanganisira ndiyo nhoroondo tsvakurudzo SCU uye nhoroondo vadzidzi dzakawanda pa SCU.
Unoda kurukura Southern Cross University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Southern Cross University musi Map
Photos: Southern Cross University pamutemo Facebook
Southern Cross University wongororo
Join kukurukura of Southern Cross University.